ကျနော်နှင့်အဠာရဿ/အထာရသ | ဥက္ကာကိုကို
Posted by oakkarkoko on September 24, 2010
Posted in: အက်ဆေး.	Leaveacomment
ယောက်ျားကောင်းတို့တတ်အပ်သော အဠာရဿတစ်ဆယ့်ရှစ်ရပ် ဆိုတာ ရှိသည်ဟု ကျမ်းကြီးကျမ်းငယ် အသွယ်သွယ်အရ သိရသည်။
ထို တစ်ဆယ့်ရှစ်ရပ်ရှိသည်ဟူသောပညာများကို ကျနော်မတတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်ကျနော်သည် ယောက်ျားကောင်းတစ်ဦးမဟုတ်တော့ဘဲ ဖြစ်သွားရသည်။
မကောင်းသောယောက်ျားဟုလည်း မထင်မှတ်စေလိုပါ။ကျနော်သည် ကောင်းတစ်ဝက် ဆိုးတစ်ဝက်ပြည့်နှဇက်နေသော ပေတေတေ၊ ပေါချာချာ၊
အူတူအတ၊ လူရည်လည်သောလူ့အန္ဓတစ်ကောင်ပင်ဖြစ်သည်။ကျနော့်ရဲ့ဆိုးမွေကောင်းမွေဟူသမျှကို လက်ခံသိမ်းဆည်းရန်
အဠာရဿဆိုတာကြီးကို ကျနော်မလေ့လာချင်ပါ။ အဠာရဿနှင့် အသံထွက်ဆင်တူသောပညာရပ်တစ်ခုကျနော့်မှာရှိပါသည်။ ၄င်းမှာ ““အထာရသ””ပညာရပ်ပင်ဖြစ်လေသည်။ရသပါသောအထာများကိုဆုပ်ကိုင်၍ ကျနော် လူ့ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းချင်ပါသည်။လူတိုင်းလူတိုင်းတွင် အထာရှိကြသည်ဟုထင်ပါသည်။ရပ်ကွက်များမှာပင်အထာရှိကြောင်းကို “ရပ်ကွက်အထာ”ဟူသည့်သီချင်းခွေ ထွက်ရှိလာ၍ သိရှိရပါသည်။
သူလိုကိုယ်လိုအထာများကြားမှ ချော်ငေါ့သွားသူကို…. ““ ဟာ…ဒီကောင်ဘာအထာလဲ ”” ဟုပြောဆိုကြသံကြားရပါသည်။ တစ်ခါတုန်းက ဘီယာဆိုင်တစ်ခုတွင်
၀ိုင်းနှစ်ဝိုင်းထ၍ရန်ဖြစ်ကြသည်။ လူအများ ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်သွား၏။ကျနော်နှင့်အတူသောက်နေသော သူငယ်ချင်းက ကျနော့်ကို မျက်ရိပ်မျက်ကဲပြပြီး
““ ဟေ့… ကိုယ့်အထာနဲ့ကိုယ်နေ”” ဟု တီးတိုးပြောသည်။
ကျနော်လည်း အထာဆိုတာ ဘာမှန်းမသိတာကြောင့် လေပဲချွန်နေရမလို၊ပုဆိုးပဲကောက်ခြုံလိုက်ရမလို၊ ခြေမပဲကုန်းကိုင်နေလိုက်ရမလိုဖြစ်သွားလေ၏။
နောက်တော့ အထာများကိုကျနော်စိတ်ဝင်စားလာသည်။ ဘယ်သူတွေဘာအထာရှိသလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ထမင်းကိုယ်မ၀ရေစာစားပြီး လေ့လာစောင့်ကြည့်၏။ တွေ့ရပါသည်။ကိုးရိုးကားယားအထာ၊ ဒလိမ့်ခေါက်ကွေးအထာ၊ ဖိုးလိုးဖပ်လပ်အထာ၊…… စသဖြင့် အထာများစွာကိုတွေ့ကြုံရပါသည်။
အရာအားလုံးတွင်ရသရှိ၏။ လူတိုင်းတွင် အထာရှိ၏။ အထာနှင့်ရသကိုပေါင်းစပ်ကြည့်သောအခါ… ““ အထာရသ ”” ဟူသည့်ရှုချင်စဖွယ်…
ချစ်စရာအကြောင်းအရာများကိုမြင်တွေ့ကြရမည်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းပင်ကိုယ့်အထာကားမည်သို့ရှိကြောင်းဆန်းစစ်တွေးတောသင့်ပေ၏။ သို့တည်းမဟုတ်လည်း ကိုယ့်အထာမည်သို့ရှိကြောင်းကိုသူတစ်ပါးကဆန်းစစ်ပေးကြလိမ့်မည်သာဖြစ်လေသည်။ ကျနော်မောင်ဥက္ကာတစ်ကောင်ကတော့အထာကျချင်ကျမည်၊ မကျချင်မကျ။ ကျနော်နှစ်သက်သမျှကိုအထာဟု မှတ်ယူပစ်လိုက်သည်သာဖြစ်၏။
တီဗီထဲမှ ဟစ်ဟော့ပ် အဆိုတော်တစ်ဦးက
““ ဟေ့… အထာတော့ကျနေပြီ… ဟေ့…အထာတော့ကျနေပြီ….”” ဟုအော်ကာ ဘောင်းဘီဂွကြားကို လက်ဖြင့်ဆုပ်ပြ၏။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်…. မောင်ဥက္ကာမှာလည်း အထာတွေရှိပေသည်။
အထာများကိုနားလည်နိုင်ဖို့ ကျနော်တို့ ကြိုးစားကြရပေမည်။
PH-Care နဲ့သန့်စင်ဖို့လိုနေတဲ့ ခင်ဗျားရဲ့မျက်နှာ →